i-arkOS: ifu lakho "eliyimfihlo" | Kusuka kuLinux
La Ukusajingijolo Pi Kwakusho uguquko emakethe yezobuchwepheshe ngoba ivumela ukuthola i-micro-computer, ubukhulu bekhadi lesikweletu, ngezindleko eziphansi kakhulu (phakathi kwama-25 nama-dollar angama-35). Ukusetshenziswa okunikezwe i-Raspberry Pi yikhona okuhlukahluka kakhulu: isikhungo se-multimedia, i-game console, iseva yangasese yokugcinwa kwefayela noma kweposi, iseva ye-VPN, njll.
I-ArkOS Ukusatshalaliswa kwe-GNU / Linux okudizayinelwe ukusetshenziswa, ngokwe-Raspberry Pi. Yize kusekelwe ku-Arch Linux, akudingekile ukuthi ube ngumsebenzisi osezingeni eliphakeme ukuyisebenzisa, ngoba imisebenzi yayo eminingi ilawulwa ngoGenesise, uhlelo lokusebenza lokusebenzisa olulula kakhulu olukuvumela ukuthi uphathe "amasevisi" ahlukile atholakala I-ArkOS.
1 Inkinga yobumfihlo
2 Liyini ikhambi?
I-Intanethi yazalwa njengenethiwekhi, okungukuthi, inhlangano yamadivayisi asezingeni eliphansi. Esikubonayo eminyakeni yamuva, noma kunjalo, inqubo ephindayo. Ngokuvela kwe- "the cloud" (ukugcinwa kwamafayela akho kuseva yangaphandle, njll.) Kanye ne- "software njengensizakalo" (izinhlelo zokusebenza zewebhu ezifana ne-Google Amadokhumenti, i-Gmail, njll.), Siyaqhubeka ngenqubo yokwenza indawo eyodwa kolwazi kanye nokuzimela kwedatha yethu ezandleni ezimbalwa. Kungaleso sikhathi kuphela lapho i-NSA ingenza khona ekwenzayo.
Lokhu kusho ukuthi inkinga ebucayi kakhulu akukhona ukuthi i-NSA noma uhulumeni ka-X bayasihlola. Ngokuvamile, abantu bayacasulwa yilolu hlobo lwesimo futhi basola ohulumeni "ngokuhlukumeza" kwabo. Iqiniso ukuthi lokhu "kuhlukumeza" kwenziwa futhi yizinkampani uqobo, hhayi ohulumeni kuphela. Kepha leyo enye indaba. Iqiniso ukuthi into ebucayi kakhulu ngalesi simo ukugxila kolwazi ezandleni ezimbalwa; izandla zezinkampani, ikakhulukazi ezaseMelika. Kungaleso sikhathi kuphela lapho kungenzeka khona ukuthi i-NSA isihlole ... noma okungenani lokho kwenza kube lula kakhulu.
Lokhu kukhulisa indawo eyodwa kungahambisani ngqo ne-Intanethi. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi kunezinkinga eziningi kakhulu ekuvikeleni ubumfihlo bethu: i-Intanethi ayizange yakhelwe ngaleyo nkinga engqondweni. Icala eliyisibonelo lalokhu engikushoyo yi- «ungangilandeli»Ukuthi iMozilla Foundation izamile ukuyikhangisa. Akuzona nje izinkampani ezimbalwa ezijoyinile, kepha bekuyinqubomgomo yokuphuma (okungukuthi, ngokuzenzakalela bayakulandelela, bese ukhetha ukuhamba) hhayi ukungena (ngokuzenzakalela ABAKULANDELEZI bese ukhetha zilandelwe). Iqiniso ukuthi inqubomgomo yokungena yokuqeda ukulandela umkhondo ibingenakwenzeka, njengoba i-Intanethi yayingakhelwanga ukuvikela ubumfihlo engqondweni.
Kuthiwani uma esikhundleni salokho ukumelana ukuhlaselwa kohulumeni nezinkampani ukwephula ubumfihlo bethu, ngabe sithatha izinyathelo ezixazulula inkinga ngempela? Kuthiwani uma esikhundleni sokuncika kakhulu ku-Google noma ku-Microsoft, singaba neseva yethu ekhaya? Ngamafuphi, i-Raspberry Pi inezindleko eziphansi nokusetshenziswa kwamandla aphansi. Ngasohlangothini lwesoftware, sine-GNU / Linux nenqwaba yamathuluzi wamahhala angasetshenziswa ukuhlinzeka nganoma iyiphi insizakalo esiyidingayo (iposi, ukugcinwa kwefayela, njll.). Udinga nje ukuhlanganisa konke lokho futhi wakhe isikhombimsebenzisi esenza ukuthi ukusebenza kube lula futhi kube enembile ngokwanele ukuze abantu bakwazi ukusebenzisa uhlelo ngendlela enkulu, futhi lokho akuyona into eyehliselwe kuma-geek ambalwa. Lokhu yikho kanye okwakucatshangwa nguJacob Cook, ingane eneminyaka engu-23, eyanquma ukudala i-ArkOS.
Isithembiso: wonke amafayela akho, ama-imeyili nokunye okugcinwe ekhaya LAKHO, ngaphansi kokulawulwa KWAKHO, nezinqubomgomo zokuphepha OZINQUMAYO, kodwa ezitholakala noma yikuphi.
UGenesise uchazwa nguCook ngokuthi "isango lakho lokungena kuwebhu esezingeni eliphansi."
Kusukela kuGenesise, ungafaka kalula ama-plugins nezinhlelo zokusebenza, ulayishe noma ulande amafayela, uphathe ifu lakho, uvuselele uhlelo lwakho, nokunye okuningi. Ungaqapha futhi isimo sohlelo futhi uthole izexwayiso lapho kuvela inkinga. IGenesise ikuvumela ukuthi wenze isipele imininingwane yakho futhi uyigcine uma kwenzeka wenza iphutha. Amanye "amasevisi" atholakala ku-ArkOS afaka phakathi: ukugcina amafayela nokuvumelanisa nge-Owncloud, ingxoxo ye-XMPP, ikhalenda, ama-imeyili, njll.
UGenesise uzama ukuhlanganisa ama-panels afanayo afana neWebMin noma i-FreeNAS web interface. Ingafinyeleleka kusuka kunoma isiphi isiphequluli, ngokusebenzisa ikhompyutha exhunywe kunethiwekhi yendawo lapho kutholakala khona iseva ye-arkOS.
El Ikhodi yomthombo kaGenesise iyatholakala eGithub.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » i-arkOS: ifu lakho "eliyimfihlo"
«... inkinga ebucayi kakhulu akukhona ukuthi i-NSA noma uhulumeni X bayasinhloli ...» Ngivumelana kakhulu nani, labo bantu abafanayo abathukuthele ngoba bayizinhloli yilabo abathumela yonke imininingwane yabo ngokuningiliziwe kuFacebook bese uyakhononda uma kwenzeka okuthile.
Ngokuqondene ne-ArkOS, kubonakala kimi kungenye indlela enhle kakhulu, kubi kakhulu ukuthi ayikwazi ukusetshenziswa lapha ngenxa yokushoda kokuxhuma, ngaphandle kwalokho, elinye iphuzu elithanda iRasberry Pi.
Ah! nendatshana enhle kakhulu ...
Inkinga 1: nsa, eu, fbi, nato, njll.
inkinga 2: izinkampani, izinhlelo njll
inkinga 3: abasebenzisi abanganaki, abangazi lutho njll
haha! isifinyezo esihle.
Iqiniso bengilindele okuningi kokuthunyelwe, okungukuthi, bengilindele izithombe zerasibheli ezigijima nale distro nokuthi ifu lomuntu lenziwa kanjani nokunye, okubi kakhulu, ngilinde kakhulu, ngiyabonga.
Ngingamjabulisa kodwa anginayo i-raspberry pi. 🙁
Bengingazi ngalokhu kusatshalaliswa futhi kunikeza konke ebengifuna ukukwenza ngeRaspbian yami (eyamiCloud neBlog ngaphezu kwakho konke), ngakho-ke nakanjani kuzoba ukuzama. Kusimangaze impela. Siyabonga ngokwabelana 😉
Futhi uma kuqhathaniswa ne-owncloud? yikuphi ukusebenza okungcono?
Akuyona i -cloud uqobo. Kuyindlela yokusebenza enesixhumi esibonakalayo sewebhu ukuphatha izinsiza ezahlukahlukene, phakathi kokunye ukugcina efwini. Uma uya kuwebhusayithi yabo ukubhekabheka i-FAQ, phakathi kwalezo zinsizakalo zokugcina amafu kuyinketho yokufaka nokulungisa i-owncloud
Siyabonga ngolwazi. Le SO (i-arkos + genesis) imane nje yicindezela lokugcina iRaspi edingeka ukuthweswa umqhele. Ngizolandela eduze ukuvela kwale phrojekthi, futhi lapho beqalisa izinsizakalo ze-VPN (sengivele ngibheke isithangami sabo futhi kusezinhlelweni zabo eziseduze) ngizobathengela iphakethe lalabo abanabo.
Lokho kungaba yindlela enhle yokuthi uthole amaseva ashibhile futhi unikeze insizakalo esekelwe "efwini" ngamanani aphansi.
Njengebhizinisi, kusebenza izimangaliso.
Ayikho inkinga! Ungakhohlwa ukunikela ku-DesdeLinux lapho uba usozigidi. 🙂
inothi elithakazelisayo kakhulu ngizothenga i-Raspberry 🙂
Kuhle! Ngiyajabula ukuthi inesithakazelo!
Kuchazwe kahle kakhulu ukubaluleka kokuba nemininingwane eyabelwe abantu. Ngicabanga ukuthenga iPC ukuze ngibe neseva ekhaya; Ngicabanga ukuthi le distro ene-raspberry izokulungela lokho. Bengicabanga nokuthenga okuthile okubiza kancane kepha ngamandla amaningi, okufana ne-QtBox (http://store.nitrux.in/) bese ubeka eyecloud nokuthile ukuphatha ibhulogi.
UGustavo Noseda kusho
Sawubona, okokuqala kunabo bonke imikhonzo. Kusuka kokuhle kakhulu okuthunyelwe, kanye nebhulogi kukonke.
Kuhle ukuthi ungakha isakhiwo se-server sonke, ngaphandle kokutshalwa kwemali.
Okuhlala kungabazeka ukuthi kungenzeka yini ukuthi kusetshenziswe kuDeskithophu yakudala, ngoba ngaso sonke isikhathi bakhuluma ngokusebenzisa i-SD ne-raspberry pi, ekhasini lephrojekthi. Ngiyaqonda ukuthi kubo kuyindlela yokonga kakhulu futhi ikhulisa zonke izici ezinhle zephrojekthi (izidingo zamandla aphansi, isikhala, ukuguquguquka, njll.). Kepha ngokuqonda kwami ​​okuthobekile kungenzeka ngokuphelele ukusebenzisa noma yimuphi omunye umshini otholakalayo, ngakho-ke ngingathanda ukuthi othile angitshele ukuthi ngabe nginephutha noma cha. Njengoba umbono ulinga kakhulu.
Ukubingelela kanye newebhu ekhululekile futhi evikeleke kuwo wonke umuntu.
Phendula uGustavo Noseda
Empeleni, ngiyaqonda okufanayo nawe: i-distro izosuselwa ku-ArchLinux ukuze isetshenziswe kunoma iyiphi i-PC. Kodwa-ke, njengoba uphakamisa, ekhasini elisemthethweni lephrojekthi bahlala bekhuluma ngokulisebenzisa ku-Raspberry Pi.
Bheka, ngivele ngabona ukuthi esigabeni sokulanda (isigaba "Esithuthukile") bachaza ukuthi ungayifaka kanjani i-arkOS ku-distro esuselwa ku-ArchLinux:
Uhlu lwe-Privoxy + AdBlock nokukhangisa okuvalelisayo.